Bogga ugu weyn / blog(Bogga 2)
Doorashada Jikada Jiid qasabadda
2020 / 10 / 28 1134
Jikada jikada laga soo saaro qasabada ayaa leh dhisme budada jilicsan iyo qorshe casri ah. Tuubada la soo jiido waxay baabi'isaa usha wax lagu kala firdhiyo ee ururiya likaha laguna tuuro sanka dulalka. Soo jiid qasabadaha ...
Daar Style-ka Foojiyaha Madbakha Madow
2020 / 10 / 28 1053
Xilliga sheekada moodada, madow waa mid aad u qurux badan. Midab aan la garan karin oo caan ah ayaa caan ku ahaa Coco Chanel oo ah midka ugu habboon uguna habboon ee beddeli kara qaar iyo waqti kasta. wax ka badan iskudhafan si aad uhesho ...
Sida Loogu Xullo Qasabadaha Jikada Ugu Fiican
2020 / 10 / 28 1031
Qasabadaha jikada ayaa maalmahan ku soo arooray naqshado badan oo xiiso leh. Tuubbooyinka waxay u muuqan doonaan kuwo fantastik ah jikada qaabka caadiga ah, halka qasabaduhu ay iftiimin doonaan naqshadda jikada casriga ah. Inuu noqdo ...
2020 / 10 / 28 1182
Haddii aad tahay fikirka dib u habaynta jikadaada sababta aad u jeceshahay inaad u siiso hal-abuur u muuqda, waxaad u baahan kartaa inaad ka fikirto kala duwanaanshaha qasabada jikadaada. Waxaa jira noocyo badan oo la mid ah ...
Ayaa Leh Audacity Si Uu Kaymaha Uguro Musqusha! Laakiin Waan jeclahay ~~~
2020 / 10 / 26 931
Dugsiga Ganacsiga Musqusha ▼ Zigzagging, agile coziness ▼ ▼ Halkan, sidoo kale dusha sare ee dusha sare ee alwaaxda, laakiin leh suuliga midabkiisa midab-guuleysiga, waa indho-qabad dhab ah! ...
In ka badan 10,000 Hambalyo ah Naqshadaynta Musqusha, Ururinta La Soo Jeediyay!
2020 / 10 / 23 1156
Dugsiga Ganacsi ee Musqusha ee Ou Xiaowei Qurxinta guri cusub ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu farxadda badan ee aad sameyn karto, waana meesha aad ku ridi karto dhammaan riyadaada mustaqbal wanaagsan. Waxaa la dhihi karaa dhammaan ...
Ma ogtahay sida xun ee musqusha “uraya” u tahay? Raadi Isha saxda ah ee lagu hagaajin karo!
2020 / 10 / 22 2299
Dugsiga Ganacsiga Musqusha Ma ogtahay sida ay u xun tahay urta musqusha? Sida lagu sheegay sahanka, urta musqusha iyo urku waxay u badan tahay inay sababaan neefta, boronkiitada, firiiric, iyo cudurrada wadnaha iyo xididdada ...
2020 / 10 / 21 2275
Dugsiga Ganacsiga Musqusha Musqusha, saxanka, qubeyska iyo qolka musqusha ka sokow, musqusha waxay kaloo u baahan tahay aalado kale oo badan, sida armaajo, tuwaallo, iyo muraayadaha musqusha. B ...
2020 / 10 / 21 2463
Cinwaanka Musqusha Xiaoxin Kawaran Qasabadaha Xidhan? / Fashilinta Qasabadaha / Tuubbada ka shaqeysa 365 maalmood sanadkii, gaar ahaan tan biyaha u isticmaasha si joogto ah, waxaa qasab ah inay ku xirmaan ...
2020 / 10 / 17 2969
Dugsiga Ganacsiga Musqusha Markasta oo aan saaxiibaday kala hadlo Japan, kama takhalusi karo hal mowduuc oo ah musqulaha. Musqulaha Japan, kuwa dadweynaha iyo kuwa gudahaba, waxay leeyihiin soo jiidasho aan sharrax lahayn, m ...
2020 / 10 / 16 3268
Dugsiga Ganacsiga Musqusha Musqusha wey yar tahay, laakiin waa qeyb aad muhiim ugu ah qurxinta waxayna xiriir dhow la leedahay nolosheena. Maalin walba nolosha halkaan ayey ka bilaabataa halkaana ku dhammaataa. Haddii aan rakibin pr ...
4.95m2 Qaabka Scandinavian-ka, Musqusha Lamaanahan Dhallinyarada ah Ayaa Xitaa Ka Wanaagsan Qolka Nolosha!
2020 / 10 / 15 3071
Ou Xiaowei Bathroom Business School Home waa halka aan jecel nahay inaan ka tirsanaano, oo leh qofka ugu dhow, waalidiinta ugu jecel, iyo carruurta ugu jecel. Hoyga, maahan oo kaliya qiimaha moodada, laakiin sidoo kale diirimaadka iyo ...